यसकारण आँखाको समस्यालाई बेवास्ता नगरौं, गम्भीर रोगको संकेत हुनसक्छ – Health Post Nepal
यसकारण आँखाको समस्यालाई बेवास्ता नगरौं, गम्भीर रोगको संकेत हुनसक्छ
२०७८ चैत २३ गते १४:२२
काठमाडौं–अक्सर मानिसहरु भन्ने गर्छन्–आँखाले हृदयको भाव बताउँछ। तर विज्ञानले पनि यही कुरा भन्छ। आँखाले मुटुको स्वास्थ्यलाई संकेत गर्छ। यदि आँखामा पीडा, चिलाई र पोल्ने गर्छ भने स्वास्थ्यमा कुनै न कुनै समस्या रहेको बुझ्न सकिन्छ। यतिमात्र नभई आँखाले कैयौं अन्य गम्भीर रोगको पनि संकेत दिइरहेको हुन्छ। जस्तो, उच्च रक्तचाप, कलेजोका रोग तथा लगातार हुने टाउको दुखाईको लक्षणको संकेत आँखाबाट पाउन सकिन्छ। थाहा पाऔं आँखाले संकेत गर्ने केही रोगका बारेमाः
१. सुख्खा आँखाको समस्या
आँखा सुख्खा हुने समस्या विशेषगरी कुनै संक्रमणका कारण हुनसक्छ। यदि यो समस्या लामो समयसम्म रहिरह्यो भने यसका पछाडि अन्य कारण हुनसक्छन्। Sjogren’s सिन्ड्रोम एक प्रतिरोधी प्रणालीमा असर गर्ने रोग हो। यसले आँखा र मुखका ग्रन्थीलाई बिगार्छ। रुमेटाइड आर्थराइटिस र ल्यूपसमा पनि आँखा सुख्खा हुने हुन्छ। साइनस हुँदा पनि आँखा सुख्खा हुनेहुन्छ। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकसँग जँचाउनुपर्छ र घरेलू उपायका रुपमा धेरै पानी पिउनुपर्छ।
२.अचानक दुई वटा आकृति देख्नु या देख्न नसक्नु
यसका पनि कैयौं कारण हुनसक्छन्। शरीरमा इलेक्ट्रोलाइटको कमीको संकेत, कमजोरी या रगतको कमीको संकेत या स्ट्रोकको सुरुवाती लक्षण पनि हुनसक्छ। यस्तै, लामो समयसम्म कम्प्युटरमा काम गर्दा स्ट्रेस या दिमागमा रगत जम्दा या कुनै कारण रक्तसञ्चार प्रभावित हुँदा दोहोरो आकृति देख्ने समस्या हुन्छ।
३. धमिलो देख्नु
सामान्यतः आँखाले धमिलो देख्ने समस्या शरीरमा कमजोरीका कारण हुनसक्छ। तर स्वस्थ महसुस गरिरहँदा पनि यस्तो बारम्बार भइरहन्छ भने कुनै गम्भीर रोगको संकेत हुनसक्छ। मधुमेहका कारण आँखाको ज्योति बिस्तारै प्रभावित हुनसक्छ भने ग्लूकोमा या मोतिबिन्दूका कारण पनि धमिलो देख्ने हुन्छ।
४. आँखा पहेँलो देखिनु
आँखा पहेंलो देखिनुले पनि शरीरमा केही गम्भीर स्थितितर्फ संकेत गर्छ। यो कलेजोसम्बन्धी रोग र जण्डिससम्बन्धी रोगका कारण आँखा पहेंलो हुनसक्छ। यस्तै, रगतको कमीका कारण पनि आँखा पहेंलो हुन्छ।
५. नानीको चारैतर्फ सेतो पत्र देखिनु
यस्तो देखिनु उच्च कोलेस्टेरोल, ट्राइग्लिसराइड बढेको संकेत हुनसक्छ भने रक्त नलीमा खराबीका कारण पनि यस्तो हुनसक्छ। रक्तनलीको खराबीले मुटुको रोग निम्त्याउँछ।
६. आँखामा धब्बा हुनु
आँखामा स–साना धब्बा देखिन्छन्। यसो हुनुमा रक्त सञ्चारमा समस्या, ओकुलर माइग्रेन तथा रेटिना फाटेको संकेत हुनसक्छ। त्यसैले आँखामा देखिएका समस्यालाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्न। आँखाका समस्याले अन्य गम्भीर रोगको संकेत गर्ने हुनाले तत्काल चिकित्सकसँग जचाइ समयमा उपचार गर्नुपर्छ।
डिस्क्लेमरः स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिए तत्काल सम्बन्धित चिकित्सकसँग परामर्श,सहयोग लिनुहोला